Yonke into ekufuneka uyazi ngamabali e-Instagram | Martech Zone
Yonke into ekufuneka uyazi ngamabali e-Instagram
NgoLwesithathu, uDisemba 13, 2017 NgoLwesithathu, Septemba 2, 2020 Douglas Karr
I-Instagram inayo Abasebenzisi bemihla ngemihla abangama-250 ezigidi kwaye inokubakho okumangalisayo kwishishini lakho, ngakumbi xa inkampani yakho yamkela Instagram Stories uphawu. Ubusazi I-20% yamashishini Ukufumana imiyalezo ngokuthe ngqo ngenxa yaMabali? Ngapha koko, i-33% yawo onke amabali athandwayo alayishwe ngamashishini!
Yintoni ibali le-Instagram?
Amabali e-Instagram avumela amashishini ukuba abelane ngokubonakalayo ibali yosuku lwabo, enemifanekiso emininzi kunye neevidiyo.
Iinyani ngamabali e-Instagram
Mde kangakanani amabali e-Instagram? Imizuzwana eli-15 inye.
Kuya kude kube nini ngaphambi kokuba amabali e-Instagram anyamalale? Bajonge iiyure ezingama-24 kuphela.
Ngaba amabali e-Instagram esidlangalaleni? Zilandela iimvume ozibekele iprofayile yakho.
Loluphi uhlobo lwevidiyo onokuyilayisha kumabali e-Instagram? Ifomathi ye-MP4 ene-H.264 Codec kunye ne-AAC audio, i-bitrate yevidiyo engama-3,500 30, umlinganiso wefreyimu engama-1080fps okanye ngezantsi, i-15px ububanzi, kunye nomda wefayile omkhulu we-XNUMXmb.
Ungasebenzisa indibaniselwano yemifanekiso, iividiyo, kunye boomerang Kwibali lakho le-Instagram.
Izitshixo ze-Instagram Story Impumelelo
Le infographic ineenkcukacha isuka INtloko yeNtloko Ukuhamba kungekuphela ekwenzeni ibali, kodwa ngaphaya kokukwakha isicwangciso se-Instagram. Nazi ezinye iingcebiso zempumelelo:
Cwangcisa umdibaniso qhinga ukufumana zonke iiasethi ozifunayo ukwenza ibali olifunayo.
Khetha ixesha apho bakholelwa khona abalandeli bakho.
Yenza i mpe mbelelo kwimizuzwana emi-4 yokuqala ukuze umboniseli ahlale lonke ibali.
Dubula ibali lakho ngokuthe nkqo -Ba baya kujonga njani abaphulaphuli bakho.
ukusebenzisa ubume be-geotagging Ukuqokelela ukubandakanyeka okungaphezulu kwama-79% ngokujolisa kwengingqi.
Yenza elula Utolo ukuba ababukeli baswayipha balandele iwebhusayithi yakho.
Ifakiwe kugxilwe hashtags ke amabali akho afakiwe kumakhonkco amaBali.
Sebenzisa usetyenziso olunje I-CutStory ukusika ibali lakho kuthotho.
Gqibezela ibali lakho ngokuqinileyo umnxeba ukukhuthaza uthethathethwano.
Cinga ngokufumana into yangaphandle nefuthe ukuthatha ibali lakho, oku kukhuthaza ukubandakanyeka phantse ngama-20%!
Sebenzisa amabali 'ngokungekho sikweni ukwakha ubudlelwane kunye nokunika emveni kwenkqubo jonga kwishishini lakho.
Nika ababukeli bamabali unikezelo olulodwa ke unokuzilanda kwaye uzivuze ngokuthembeka kwazo.
Sebenzisa amabali ukuTsala a poll ukuya kubaphulaphuli bakho usebenzisa isitikha sokuvota. Yigcine imfutshane kwaye imnandi, unabalinganiswa abangama-27 kuphela!
Amabali e-Instagram akhule kakhulu ukusukela oko yasungulwa ngo-Agasti ka-2016, kwaye ukufumanisa indlela yokwenza okuninzi kuya kuba luncedo olukhulu kwimizamo yakho yokuthengisa kwimithombo yeendaba. Ingaba ulunde ntoni? Qala ukubalisa iBali lakho ngoku. INivine esuka kwiNtloko yeNtloko yeNtloko
Nantsi eyona infographic, Isikhokelo samashishini amancinci kumabali e-Instagram:
tags: instagrammabaliIiVidiyo zeNtengisoamabali
I-Conversica: Nxibelelana, Zibandakanye, ukondle kunye nokuQiniseka usebenzisa uMncedisi we-AI
IGong: Ingxoxo yeQonga lobuNgcali bamaQela okuThengisa